Kicinta shirkadda Cannabis | Qareenka Xashiiska | Tom Howard
Waxay ka badan tahay 20 sano hadda tan iyo markii ay California oggolaatay isticmaalka iyo iibinta xashiishadda caafimaadka. Intii lagu jiray 20 sano, 30 dowladood oo kale ayaa ku booday bandwagon, iyo isticmaalka marijuanaata caafimaad ayaa guud ahaan la aqbalay.
Si loo daryeelo baahida kor u kacaysa, meherado badan oo marijuana ayaa lagu soo bandhigay qaybo kala duwan oo dalka ah. Sidaas darteed, ganacsiga dheriga ayaa si aad ah kor ugu kacay sannadihii ugu dambeeyay, iyo badeecooyinka la xiriira, oo ay ku jiraan kaydka, ayaa soo jiitay dareenka maal-gashadayaasha daafaha adduunka.
In kasta oo warshadda marijuanaaddu ay tahay mid aad u qaali ah, ayaa dhawr shirkadood ay hore ugu fashilmeen sababo kala duwan awgood. Laakiin maxaa dhacaya marka ganacsiyada marijuana aan lagu guuleysan? Ma haystaan ​​ikhtiyaar ay ku xareyaan kicitaan, sida ganacsiyada kale?
Hoos waxaan ku eegaynaa kicinta daroogada cannabis, iyo sidoo kale xulashooyinka ay heli karaan maalgashadayaasha ganacsigoodu ku guuldareysto inuu jabiyo xitaa ama guuleysto.
Mid ka mid ah xulashooyinka kala duwan ee laga heli karo meheradaha ku guuldareysta ayaa ah xereynta magangalyada kicinta. Markii ay xareyaan dacwad kicinta, ganacsiyadahan kaliya ma awoodo inay baabi'iyaan deynta, laakiin sidoo kale way u fududaaneysaa iyaga inay dib u qaabeeyaan cadaadis maaliyadeed oo yar. Nasiib darrose, ikhtiyaarkan ayaan loo haynin meheradaha warshadaha marijuana.
Waqtiga xaadirka ah, meheradaha marijuana uma qalmaan ilaalinta kicinta federaalka. Tani waxay qusaysaa xitaa gobolada ay dherigu sharci ka yahay. Isku raacsan ayaa ah in illaa inta marijuana ay wali tahay walax la xakameynayo, ganacsatada warshadahaan dowladdu ma ilaaliso markay timaado kicitaan.
Tani waa sababta oo ah dhammaan kiisaska kicinta waxaa laga maqlaa maxkamadda federaalka. Si kastaba ha noqotee, sida ku xusan Xeerka Maandooriyaha La Xakameynayo, marijuana waxaa wali loo tixgeliyaa jadwal I daawo, taas oo macnaheedu yahay inay sharci darro tahay in la beero, la qaybiyo, ama la qoro.
Maaddaama sharciga federaaliga uu xukumayo musalifnimada, Suuragal ma ahan in Ammaan-bixiyeyaasha Musalafnimada ee Mareykanka ay maamusho ama xakameeyaan hantida loo arko inay sharci darro yihiin iyada oo aan sharciga la jabin.
In kasta oo ay tani maal gelinaysa maalgashadayaasha marijuanaada, rajadii oo dhan lumisay. Waxa jira dhowr ikhtiyaar oo kale oo loo heli karo ganacsiga xashiishadda oo aan loo qaadan sidii la filayay. Waxay ka mid yihiin:
Xulashadani waxay ku lug leedahay u beddelka hantida ganacsiga inay noqoto lacag caddaan ah, oo loo isticmaali karo in lagu bixiyo deynta deyn-bixiyeyaasha. Liquiddu waa mid tabaruc ah ama khasab ah, iyo tillaabooyinka ku lug leh labada nooc ee dejintaan way kala duwan yihiin.
Arrinta ku saabsan ka-wareejin qasab ah, maxkamadda ayaa ku lug leh. Amaahiyuhu wuxuu maxkamada ka codsanayaa inay shirkada u ogolaato. Tani badanaa waxay dhacdaa marka deyn bixiyayaashu aaminsan yihiin in shirkadda ay khusayso aysan awood u lahayn bixinta deymaha.
Tabarruc ikhtiyaariga ah, maxkamaddu lug kuma laha. Waa agaasimeyaasha shirkadda ee bilaabaya habraaca ka-saarista markii ay caddaato in shirkadda ay ku adkaan doonto bixinta deymaha. Xaaladaha badankood, shirkaddu waxay awoodaa inay xalliso deymaha oo dhan kadib dareere ka dib.
Isla markii la dhammeeyo dareeraha, shirkadda waa la kala dirayaa. Mudada dareeraha wuu kala duwanaan karaa iyadoo kuxiran kakanaanta ganacsiga, iyo qodobo kale. Hawshu badanaa waxay ubaahantahay ku lug lahaanshaha khabiir ku takhasusay cilmiga, kaas oo shaqadiisa ugu weyni ay tahay inay talobixin ka bixiso talaabooyinka la qaadayo heerar kala duwan oo howsha biyo galinta.
Fursadda kale ee laga heli karo dadka ka ganacsada dheriga waa helitaan. Qaadashada Qaab-dhismeedka ayaa ah hab ay deyn-bixiyeyaashu u noqdaan milkiyeha hantida deyn lagu leeyahay.
Qof aamin ah oo ka socda meheradda ayaa loo magacaabay inuu u noqdo sidii qaataha oo iibiyo waxyaabaha marijuanaada sida waafaqsan garsoorka. Hawshani badanaa waxay dhacdaa kadib markay deyn bixiyeyaashu iyo deyn bixiyeyaashu ku heshiiyaan habka ugu wanaagsan ee wax loo qaban karo markii ay wajahaan kicitaan
In kasta oo lacag-ururintu aysan ahayn wax la wadaago, waxay ka caawin kartaa deyn-bixiyeyaasha inay si dhakhso leh uga baxaan deynta dhaqaale. In kasta oo deyntu ay luminayaan hantidooda, howshu waxay u saamaxdaa deyn bixiyeyaasha inay soo ceshadaan dhaqaalahooda.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in qofka wax helaa uu u dhaqmo si waafaqsan danta amaahda. Tani macnaheedu maahan in mulkiilaha ganacsigu uusan bixin karin hagitaankooda, gaar ahaan xaaladaha noocaas ah sida socodsiinta ganacsiga dheriga. Waxaa jira siyaabo badan oo milkiilaha ganacsigu loogu isticmaali karo in lagu kordhiyo qiimaha hantida iyo in la hubiyo in dhammaan deymiyayaashu ay ku qanacsan yihiin dhamaadka howsha.
Khataraha Ganacsatada marijuana
Xaqiiqda ah in meheradaha warshadahaan aysan u qalmin in ay xareystaan ​​khariidad federaal ayaa micnaheedu yahay amaah-bixiyeyaashu waxay ka feejignaanayaan in ay horumariyaan amaahdooda Hay'adaha amaahdu waxay si aad ah u ogyihiin in haddii ay dhacdo in ganacsigu hoos u dhaco, fursadda ay dib ugu heli karaan lacagtooduna ay yar tahay.
Xaqiiqdii, ganacsatada ku guuleysta helitaanka amaahda hay'adaha amaahda waxaa badanaa laga qaadaa dulsaar sare marka la barbar dhigo ganacsiyada kale.
Wershadaha marijuana sidoo kale waxay la kulmaan qatar kale oo maal gashadeyaashu ay tahay inay ogaadaan. Shuruucda xukuma iibinta marijuanaada ayaa sii kordheysa, maalgashadeyaashana waa in ay ka waantoobaan isbadalladaan. Haddii ay dhacdo in sharciga la jebiyo inta ay ganacsiga sameynayaan, aad ayey ugu fududahay iyaga inay lumiyaan liisanadooda xashiishadda.
Sidaas oo kale, waxaa muhiim u ah meheradaha marijuana inay si wadajir ah ula shaqeeyaan garyaqaanno khibrad leh oo bixin kara la-talin sharciyeed goorta iyo meesha loo baahdo.
Akhbaarta wanaagsan, si kastaba ha noqotee, waa in warshadaha weedku ay kordhayaan, taasoo la micno ah in kuwa galaya warshadaha ay u badan tahay inay ku guuleystaan ​​oo ay ku maalgeliyaan maal gashikooda waqti yar gudahooda.
Waxaan nahay shirkad sharci ku saleysan Peoria, Illinois. Magacaygu waa Qareen Thomas Howard. Waxaan ku takhasusay arrimaha sharciga ganacsiga ee xashiishadda oo waxaan la shaqeeyaa koox qareenno karti u leh inay talo sharci ah siiyaan maalgashadayaasha ganacsiga marijuana.
Haddii meheraddaada xashiishadda ay la soo gudboonaato caqabad xagga dhaqaalaha ah, nala soo xiriir. Kaliya talo ku siin mayno laakiin sidoo kale waxaan kala xaajoon doonnaa deyn bixiyahayaga si loo hubiyo in labada qayboodba ay qaadaan tallaabada ugu wanaagsan.
Waan fahamsanahay sida dhibku wajaho deyn bixiyeyaasha, sida qaasatan haddii aad leedahay fursado xaddidan oo ganacsigaaga lagu badbaadiyo. Waxaan ogsoonahay in inkasta oo ay arrimuhu u muuqan karaan kuwo dhib badan, marwalbana waxaa jira wado laga baxo. Waxaan haynaa koox khubaro ah oo dhaafi doona buugaagtaada oo kaa caawin doona inaad gaarto go'aan aqoon leh.
Waxaa naga go'an inaan kuu fududeyno inaad ganacsi sameyso oo aad xalliso caqabadaha badan ee ka jira wershadaha marijuana. La xiriir shirkaddeenna sharciga ku saleysan ee Illinois, waxaanan ku siin doonnaa talo qiimo leh oo ku saabsan sida aad uga bixi karto naftaada dhibaato dhaqaale cadaadiska ugu yar ee deyn bixiyeyaashaada.